Kitra – «Can 2019»: mila mandresy an’i Ginea Ekoatorialy ny Barea, anio | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: mila mandresy an’i Ginea Ekoatorialy ny Barea, anio
Ho fantatra rahampitso izay ho tohin’ny lalan’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), taranja baolina kitra. Mila mitady fandresena mantsy ny Malagasy raha te hiatrika izany.
Hifantoka etsy amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona avokoa ny sain’ny Malagasy rehetra, amin’ity anio ity, indrindra fa ireo mpankafy ny baolina kitra. Ho fantatra eny mantsy ny ho tohin’ny lalan’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiadian-toerana hiatrehana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019).
Fihaonana miverina, hifandonana amin’ny Nzalang Nacional avy any Ginea ekoatorialy. Mila mitady fandresena ny Barea raha te hahazo ny tapakila handehanana any Kameronina, amin’ny taona ho avy, hiatrehana izany Can, izany. Raha tsiahivina, efa manana tombony ny ekipam-pirenena malagasy, efa nandresy an-dry zareo Gineanina, tany amin’ny taniny, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0.
Na izany na tsy izany, mila mailo hatrany ny Barea satria mbola manana herijika hahatafitana ihany koa ry zareo Nzalang Nacional. Fantatra fa tsy ho afaka hilalao i Ibrahim Hamada, amin’ity noho ny karatra mavo roa azony, nandritra ny fihaonana tamin’i Senegal sy teo amin’ny lalao natao, ny asabotsy lasa teo, tany Malabo.
Hiatrika ity fihaonana miverina ity kosa i Metanire, izay tsy afaka niatrika izany, nandritra ny fihaonana mandroso. Na eo aza izany, tsy tokony hahasakana ny lalan’ny Barea de Madagascar, ny Gineanina. Manana ny tombony sy ny herijika rehetra hahafahana mandresy ny Barea de Madagascar, amin’ity izay hilalao eo amin’ny kianjany sy manoloana ireo mpijery azy.